Funny Photo Maker 1.00 Portable...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော်ဒီနေ့ Funny Photo Maker 1.00 Portable လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...!ဓါတ်ပုံတွေကို Funny Picture ကလိချင်ရင်တော့ ဒါလေးယူထားနော်...!လုပ်ရတာလည်းလွယ်ကူပါတယ်...! Portable လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Install လုပ်စရာမလိုပါဘူး...!ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 16.5 MB ရှိပါတယ်...!ကျွန်တော် အောက်မှာ Media Fire လေးဖြင့်တင်ပေးထားပါတယ်...!
"ဒီမှာယူသွားပါ..." (16.5 MB)
1 Response to Funny Photo Maker 1.00 Portable...!
ဆရာ ဆိုက်ကိုဒေါင်းမရတော့ဘူး လင့်သေနေတယ်